काठमाडौँ : चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको छ। डा. केसीको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरूले बुधबार बिहान डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको बताएका छन् ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप घटेर ७० र ५० पुगेको छ । यस्तै केसीको शरीरमा थकान, रिंगाटा लाग्ने, मुटुको धड्कन अनियमित, मांसपेशी दुखाइको समस्या आउनुको साथै डाक्टर केसीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पनि घट्दो छ।
डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि केसीको उपचारमा रहेका चिकित्सकहरू आन्तरिक परामर्शमा छन्। यसअघि अनसन बसेका बेला डाक्टर केसीलाई इलेक्ट्रोलाइटस् दिने गरिएको भए पनि यसपटक उनले त्यसलाई लिन मानिरहको छैनन् ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले डा. केसीलाई आइसीयुमा राख्न सुझाव दिए पनि डा. केसीले भने मानेका छैनन् ।